विराट अस्पतालका डाक्टरसहित चार जनामाथि कुटपिट (भिडियोसहित) - SatyaPatrika
बिरामीका कुरूवाले मंगलबार अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. सुदिप यादवसहित अस्पतालका चार जना कर्मचारी कुटपिट गरेका हुन् । कुटपिटबाट डा. यादवको गालामा चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीमा उपचारमा लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै बुढीगंगा गाउँपालिका–२ का अनिस श्रेष्ठ र निश्चल श्रेष्ठले चिकित्सकसहित चार जनामाथि कुटपिट गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
अनिस र निश्चल दाजु भाइ हुन् । उनीहरूको आमाको ब्लड प्रेसर घटेपछि मंगबलार विहान विराट टिचिङ्गि हस्पिटलको आकस्मिक कक्षमा ल्याएका थिए । आमाको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै चिकित्सक यादव, हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेत, सुरक्षा गार्ड र अर्का एक जना कर्मचारीमाथि हातपात गरेको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सुनिल देवले जानकारी दिए । बिरामीका कुरूवाले सुरूमा सुरक्षा गार्डमाथि हातपात गरेका थिए । त्यसपछि चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको अस्पतालले जनाएको छ । घटनाको विषयमा कसरी अगाडी बढने यस विषयमा अहिले अस्पतालमा छलफल भइरहेको छ ।
स्राेत : healthaawaj
अत्याधिक रक्तश्रापले १९ बर्षिया सुत्केरी किशोरीको ज्यान गयो
६० प्रतिशत छायांकन सकेर ‘प्रेमगन्ज’ टिम काठमाडौंमा